Marina ve: Mandry ambonin'ny vato, miorina eo ambony vatolampy
lundi, 04 février 2019 09:47
Oha-pitenena malaza izay hoe mandry eo ambonin'ny vato, tsy misy atahorana, tsara fototra.
Hitatsika anefa ny tsy fahamarinana tanteraka izay raha ny zava-mitranga tatoato teny ambanin'Ampamarinana, toa ilay vato natokisana indray no nianjera namono olona maro.
Inona tokoa moa ny vato?
Misy karazany maro ny vato, fa azo sokajiana telo lehibe izy:
- Vato azo avy amin'ny fipoahan'ny volkano avy ao ambanin'ny tany (Roche magmatique)
- Vato azo avy amin'ny tsindry mavesatra vokatry ny fifanosehan'ny tany (Roche métamorphique)
- Vato azo avy amin'ny fahalovan'ireo singa mineraly maro (Roche sédimentaire)
Ny mahasarika ny saintsika eto dia ireo karazam-bato roa voalohany.
Efa tsy misy volkano raha ny eto Antananarivo renivohitra no resahina, fa aza adino fa miaina ny tany, mihetsika izy, mifanosika eo ambony tsiranoka mangotraka ao ambany tany ao, izay no mahatonga ny tendrombohitra, mifanosika ny tany dia miakatra izy, rehefa tsy zakany, dia mety mitresaka izy, faille.
Ny vato dia tsy singa tokana no mandrafitra azy matetika, hafatsy ireny vato madio toy ny marbre ireny, fa matetika dia misy fasika any anatiny, na misy calcaire, na misy loto hafa toy ny hazo lo, izany hoe rehefa tratran'ny rano ireny dia manaraka ny rano, dia mamela lavaka madinika ao anelanelan'ny vato, rehefa mihitatra izay lavaka madinika izay, dia mety mikorisa mitresaka ilay vato.
Rehefa tratran'ny masoandro ny vato, dia mihitatra (dilatation), ary rehefa hariva mangatsiaka ny andro, dia mifintina indray izy (contraction), ka toy ireny tariby aforitra dia velarina ireny, ka miteraka afanana, ary tapaka ny farany. Dia mizara tsikelikely toy izany ny vato, ary lasa toy ny fasika mihitsy aza rehefa ela, ohatra désert de Sahara, vatobe tany teo aloha, fa io lasa fasika amin'ny velaratany lehibe io sisa, satria ny atoandro any mahatratra 40°c ny hafanana, ary ny alina dia midina -20°c.
Toliara any Atsimo andrefana izao dia efa tratran'izany. Mihalasa fasika ilay vato lehibe teny ampiandohana.
Inona ny vahaolana, satria misy trano eny ambonin'ilay harambato heverina fa mafy nefa mamono?
Fanapahan-kevitra tsotra indrindra ny hoe esorina ny mponina eny, ary dia tsy avela anorenana intsony eny. Mila vola be anefa izay fanapahan-kevitra izay, satria tsy maintsy onerana ny vidin'ny tany sy trano eny amin'ireny faritra ireny.
Raha tombanana ambany 10 000 000 Ariary ny omena ny tompon'ny trano iray, dia raha trano 2000 no voakasik'izany, dia efa 20 miliara ariary ny vola ilaina amin'izany, na mitovy vidy amin'ny fanaovan-dalana Vodyala - Ambatondrazaka RN44, na ny Ambilobe - Vohemar RN5, tsy isaina ny fotodrafitrasa lehibe toy ny tetezana.
Raha atao bondongerina fotsiny koa anefa hoe, ianareo no te hanorina ety amin'ny faritra tsy azo anorenana fa dia miala maina ianareo, dia hiteraka krizy sosialy goavana izay, ary hihitatra hatramin'ny lafiny aran-tantara faham-panjaka mihitsy ny resaka, tanàna ambony an'ny andriana sy ny mpanana, ary ny tanàna ambany an'ny manga sy ny tsy manana.
Azo atao anefa aloha, ary tsy andaniana vola be ny manisy grillage de fixation et de protection, na karazana harato vy lehibe hitazona ireo bolongam-bato tsy hietsika, na tsy hirotsaka raha efa misaraka amin'ilay renim-bato izy.
Azo atao ihany koa ny mifehy ny fikorinan'ny rano, satria io rano misitrika any anaty lavabato io no anisan'ny mamotika ilay vato sy mampisaraka azy.
Azo atao ihany koa ny manao injection béton armé any anatiny. Mila fotoana kosa ity, satria tsy maintsy hisy asa vaventy atao.
Ny vato dia mafy, fa ny tsindry no tena zakany, fa izy tsy mahazaka aholana, na aforitra, na sintonina (Torsion, flexion, traction), ary izay no ampidirana vy ao anatiny.
Toy ny béton armé, misy vy, mizaka ny Torsion, flexion, traction, ary misy vato mizaka ny pression na ny tsindry, ary ny fasika mameno ny lavaka madinika anelanelan'ny vato, ary ny ciment no lakôly mampitambatra azy rehetra.
Ny tombana ara-bidin'ny asa sy ny resaka sosialin'ny Mponina ihany anefa no mamaritra izay fanapahan-kevitra farany amin'izany.